रवि लामिछानेसहित तीनैजनाविरुद्ध आत्महत्या दुरुत्साहनको मुद्दा दर्ता,अब के हुन्छ? - The First Nepali Digital Newspaper from Australia (Ausnepal news)
काठमाडौं । टेलिभिजन कार्यक्रम प्रस्तोता रवि लामिछानेविरुद्ध चितवन जिल्ला अदालतमा आत्महत्या दुरुत्साहनमा मुद्दा दर्ता भएको छ। नेपाल प्रहरीले आफ्नो अनुसन्धानमा लामिछानेले पत्रकार शालिकराम पुडासैनीलाई आत्महत्या गर्न दुरुत्साहन गरेको निष्कर्ष निकाल्दै तदनुरूप मुद्दा चलाउन सरकारी वकिलको कार्यालयमा प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेपछि सो मुद्दा दर्ता भएको हो।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवन र नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो सीआईबीले रवि लामिछाने, उनका सहकर्मी युवराज कँडेल र अस्मिता कार्कीले पुडासैनीलाई आत्महत्या गर्न दुरुत्साहन गरेको निष्कर्ष निकाल्दै उनीहरू तीन जनाविरुद्ध मुलुकी अपराध संहिताको दफा १८५ अन्तर्गत मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको थियो। सीआईबीका प्रहरी उपरीक्षक दीपक रेग्मीले आफ्नो अनुसन्धान पूरा भएको जानकारी पत्रकार सम्मेलन गरेर दिएका थिए।
आत्महत्या दुरुत्साहनको अभियोग प्रमाणित भएमा अभियुक्तहरूलाई पाँच वर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना हुने कानुनी व्यवस्था छ।
गत वर्ष भदौदेखि कार्यान्वयनमा आएको मुलुकी अपराध (संहिता) ऐनले आत्महत्या गर्न बाध्य पार्नेलाई सजायको व्यवस्था गरेको हो।
मधेस आन्दोलन सम्बोधन गर्न के गर्दै छन् तीन दल ?
मंसिर १३ । काठमाडौं,तराई मधेसको समस्या समाधानका लागि प्रमुख तीन दल कांग्रेस, एमाले र एमाओवादी समान धारणा […]
बेँसीसहर, २७ जेठ - साहित्य र सङ्गीतका क्षेत्रमा योगदान गरेको भन्दै ठाडो भाका शिरोमणि दीर्घराज अधिकारी […]
काठमाडौं । बगबन्धु अन्तर्राष्ट्रिय गोल्डकप फुटबलको साबिक विजेता नेपाल यसपटक भने समूह चरणबाटै बाहिरिएको छ । […]
जिन्दगीमा साइकल सिक्न सक्छुजस्तो लाग्दैनथ्योः ऋतिक रोशन
एजेन्सी, को तारिफ नगर्ने कमै हुन्छन् । दुनियाँका नजरमा ऋतिकको ‘स्टारडम’ निकै माथि छ । तर, आफ्नो बचपन […]
देशभरका ७ विमानस्थलमा उडान अवरुद्ध
काठमाडौं । आज विहानैदेखि परेको अविरल वर्षाका कारण देशभरीका विभिन्न ७ विमानस्थलमा उडान तथा अवतरण अवरुद्ध भएको […]